Vanotsigira VaMnangagwa Vokurudzirwa Kusaendesa Nyaya dzeBato kuMatare
WASHINGTON — Vakuru vemuZanu-PF vari kukurudzira vanhu vari kutsigira munyori anoona nezvemitemo mubato, uye vari gurukota rezvemitemo, VaEmmerson Mnangangwa, kuti vatambire zviri kubuda musarudzo dzematunhu, uye kuti vasaende kumatare nenyaya dzinofanirwa kugadziriswa mubato.
Vamwe vanotsigira VaMnangagwa, kusanganisira mudzimai wavo, Auxillia, vakaenda kumatare vachiti vanoda mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora kubva kuna sachigaro weZanu-PF akakunda musarudzo dzemuMidlands, VaJason Machaya, vachivapomera mhosva yekusvibisa mazita avo.
Izvi zvinotevera tsamba yainge yanyorwa nemumiriri waVaMachaya musarudzo idzi, VaDouglas Kanengoni, avo vakati Amai Mnagagwa nevamwe vavo vana, vaida kubiridzira sarudzo kuitira kuti VaLarry Mavimha, avo vaikwikwidzana naVaMachaya, vakunde vachishandisa mari, kutyisidzira vanhu nezvimwe zvikiribidi.
Tsamba iyi yakaendeswa kuna Amai Olivia Muchena avo vaiona nezvesarudzo idzi.
Musarudzo dzematunhu dziri kuitwa, panonzi paita kunetsana kwakanyanya pakati pevanhu vanotsigira VaMnangagwa nevanotsigira mutevedzeri wemutungamiri webato, Amai Joyce Mujuru.
Iyi inonzi ihondo yekuda kuzotsiva mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kana vaenda pamudyandigere. Zanu-PF iri kuita musangano wakakosha wekongiresi iyo uchasarudza vatungamiri vatsva.
Vari kuziva zviri kuitika mubato vanoti kunetsana kuri kuitika mubato kuri kukonzerwa nekongiresi yegore rinouya, iyo ichasarudza vatevedzeri vaVaMugabe vaviri.
Sarudzo dzaitwa kuMidlands, Mashonaland Central neManicaland dzinoratidza kuti dzakundwa nevanhu vanotsigira Amai Mujuru.
Kunyange hazvo vanotsigira VaMnangagwa vari kuti sarudzo dziri kubirirwa vachida kuti Central Committee iite musangano wechimbichimbi wekuzeya nyaya iyi, zvinenge zviri kukona n’anga murapwa achida.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vaudza Studio 7 kuti vanhu vanenge vakundwa sarudzo vanofanira kubvuma kukundwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro paRhodes University kuSouth Africa, VaGideon Chitanga, vanoti kugadzirisa dambudziko reZanu-PF kuchanetsa asi vanoona Amai Mujuru vaine mukana wakakura wemunhu achatora chinzvimbo chaVaMugabe.
Kunyange hazvo paine kudonzerana masimba muZanu PF, bumbiro remitemo yebato rinoti kana VaMugabe vachisakwanisa kuita basa ravo, mutevedzeri wavo wekutanga ndiye anotora basa ravo kudzamara pazoitwa kongiresi yekutsvaga hutungamiri hutsva.